SuperGIS, aragti hore - Geofumadas
SuperGIS, aragti ugu horeysay
Disember, 2012 Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay, SuperGIS
In aynu macnaha Western SuperGIS ayaa gaadhay meel la taaban karo, si kastaba ha ahaatee bariga, oo ka hadlaya wadamada sida Hindiya, Shiinaha, Taiwan, Singapoore, in la xuso dhowr-SuperGIS ayaa meel xiiso leh. Waxaan la qorsheeyay si ay u tijaabiso qalab inta lagu jiro 2013 sanadka sidii aan u sameeyey la GvSIG y GIS kala cayncayn ah; marka la barbardhigo shaqadooda; waayo hadda waxaan ku siin doonaa kormeerka ugu horreeya ee ku saabsan nidaamka deegaanka.
model scalability The ma yeero asalka u ah nidaamka, oo asal ahaan u dhashay la SuperGeo, shirkad sheegtay in la qaybiyo waxyaabaha of ESRI ee Taiwan ogaaday in ay ahayd si fudud loo sameeyo ay wax soo saarka gaar ah inay iska iibiso mid ka mid shisheeye. Haddaba, isagu waa qaarad kasta, istaraatijiyad caalami ah in ayaa sheegay in howlgalka: hesho in ay ka mid Top 3 ee noocyada la joogaan caalamka iyo hogaaminta ee hal-abuurnimo farsamada ee macnaha guud geospatial noqon.
Laga soo bilaabo halkaas, waxay u muuqataa in ay tahay mid ka mid ah codsiyada ESRI ee ugu badan loo isticmaalay, sida in xitaa magacyada ay isku mid yihiin; iyada oo la qabsasho u gaar ah oo u yimid inay bixiyaan qiimo xiiso leh iyo dabcan qiimo aad u jaban.
Laynka ugu muhiimsan hadda ee ku saabsan soo saarida version 3.1a waa kuwan soo socda:
Halkan waxa soo saarka ugu weyn waa SuperGIS Desktop, kaas oo ka kooban hababka aasaasiga ah ee qalabka GIS ee dhinacyada sida qabashada, dhismaha, falanqaynta xogta iyo soo saarista khariidooyinka daabacaadda. Waxaa jira qaar ka mid ah "Add-ons" kuwaas oo bilaash ah ee version this, inta badan si ay version version desktop macmiilka ah oo ku saabsan xog ka adeegay dheeraadka kale. Kuwa ka mid ah kuwan soo socda:
Macaamiisha OGC waxay ku xirantahay heerarka sida WMS, WFS, WCS, iwm.
GPS si uu u xiro qof qaata oo maamulo xogta ay hesho.
Macmiilka loogu talagalay Geodatabase oo ay taageereyso soo dejinta lakabyo ka yimid Access MDB, SQL Server, Oracle Spatial, PostgreSQL, iwm.
Khariidadda Qalabka Tile, oo aad ka abuuri karto xog la akhrin karo SuperGIS mobile iyo dalabyada Super Web GIS.
Macmiilka Macmiilka, in uu ku xiro xogta adeegga SuperGIS Server oo u dhajiso sida lakabyada version-ka ah ee desktop-ka oo suurtogal ah in la falanqeeyo iyaga oo ah haddii ay ahaayeen lakab hoose.
Macaamiisha Desktop Macaamiisha Macaamiisha, sida kuwa hore, si ay ula falgalaan sameynta booska, shaandhaynta iyo falanqaynta xogta la adeegsaday kordhinta adeegga muuqaalka.
Intaa waxaa dheer, kordhinta soo socota waxay u taagan tahay:
Falanqeeyayaasha Dagaalka ee Muuqaalka
Falanqeeyayaasha kala duwan ee bayoolojiga. Tani waxay soo jiidataa dareenka sababtoo ah waxay ka badan tahay 100 qiyaasta qiimeynta meelaha xayawaanka ee xayawaanka dabiiciga ah.
Oo codsiga kaliya ee Taiwan ay yihiin CTS iyo CCTS, oo aad isbedel ku dedan lagu isticmaalay dalka this (TWD67, TWD97) ka dhigi kara iyo xirmaan database-da'ayeen taariikhiga Taiwan iyo Shiinaha.
Kuwani waa qalab loogu talagalay daabacaadda khariidadaha iyo maareynta xogta meelaha la wadaago. Waxa kale oo ay u oggolaaneysaa in barnaamijka moobilka uu ku taageerayo macaamiisha adeegga moobilka oo loo sameeyay qaababka webka ee SuperGIS Desktop, SuperPad, WMS, WFS, WCS iyo heerarka KML.
Si aad u daabacdo xogta waxaad leedahay codsiyada soo socda:
SuperWeb GIS, jilayaal xiiso leh si loo abuuro adeegyo internet ah oo leh hab-raacyo horey loo soo koobay oo ku salaysan Adobe Flex iyo Microsoft Silverlight.
Server SuperGIS Image
Server SuperGIS Server
Tani waa maktabada qaybaha horumarinta codsiga iyadoo la adeegsanayo standard-ka OpenGIS SFO oo leh Visual Basic, Visual Studio .NET, Visual C ++ iyo Delphi.
Marka laga soo tago nooca guud ee lagu magacaabo SuperGIS Engine waxaa jira faahfaahin dheeraad ah oo, sida noocyada kala duwan ee server, waxay la siman tahay fidinta moobilka:
Noocyada Waxyaabaha Muuqaalka ah
Walxaha kala duwan ee bay'ada
Codsiyada moobiilka waxaa ku jira qaar ka mid ah farsamooyinka caadiga ah, iyo kuwa kale oo ku takhasusay qaabka loogu talagalay isticmaalaha dhammaadka:
SuperGIS Mobile Engine si loo horumariyo codsiyada qalab mobile.
SuperPad si loo qabto habka GIS ee caadiga ah
SuperField iyo SuperSurv oo awood u leh inay codsi ku yeeshaan aagga dusha sare
SuperGIS Mobile Tour ayaa aad u macquul ah in la abuuro shaqooyin loogu talagalay dalxiisyada dalxiiska oo ay ku jiraan walxaha maadada badan.
Mobile Cadastral GIS, waa barnaamij gaar ah oo loogu talagalay maareynta cadastu laakiin waxaa kaliya oo loo heli karaa Taiwan
Khadka tooska ah ee GIS
Gebogebada, khadad xiiso leh oo ah badeecooyin aan buuxineynin kala duwanaansho la'aanta ESRI, waxay u taagan tahay beddel dhaqaale oo loogu talagalay isticmaalaha oo ka badan qalabka 25. Taas ayaa hadda ku dareysa liiska software ee aan dib u eegney.
Post Previous«Previous Ugu Fiican 2012 ee Geofumadas
Post Next Shuruudaha: 25 akhbaar saameyn leh oo nagu soo raacayaNext »
Hal Jawaab u Jawaab "SuperGIS, aragti hore"
Felix Gonzalez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan fursad u helay in aan la xiriiro dadka mas'uul ka ah SUPERGIS ee suuqa Yurub.
Shaki la'aan, SUPERGIS waxay noqon doontaa tartan tartiib tartiib ah ESRI (Waxaan rajeynayaa inay taasi tahay kaddibna go'aansato in qiimaha hoos loo dhigo); laakiin waxa uu leeyahay dhibaatooyin suuq geynaya oo adeeg ah oo aan horeba u sheegay. Inkasta oo ay shirkadaha kala hadlayaan suuqa (sida kiiskeyga), waxay diidaan inay taageero farsamo ka helaan dalalkooda. Laga soo bilaabo aragtida aragtideeda waa qalad tan iyo markii aad u baahan tahay xiriir toos ah oo la xiriira taageero farsamo.